ONLINE MPISOLOVAVA MPANORO HEVITRA MAIMAIM-POANA
ONLINE MPISOLOVAVA MPANORO HEVITRA MAIMAIM-POANA TSY MISY FISORATANA ANARANA
Ny nentim-paharazana ny fomba hahazoana fanampiana avy amin’ny manam-pahaizana ao amin’ny toe-javatra toy izany dia ny torohevitra araka ny lalàna. Ny mpahay lalàna, toy ny olona hafa rehetra, mahafantatra ny lalàna, ny mampihavaka sy ny fivoaran-draharaha ankehitriny. Ankoatra izany, ny mpahay lalàna dia afaka manazava ny olon-tsotra ny dikan’ny ity na ny andininy amin’ny lalàna, ny fampiharana sy ny vokany. Ny fampandrosoana ny teknolojia vaovao dia nanome hitsangana ho isan-karazany ny fanampiana ara-dalàna, ao anatin’izany ny maimaim-poana amin’ny aterineto torohevitra araka ny lalàna nandritra ny finday. Ao amin’ny tranonkala na iza na iza dia afaka mahazo feno ara-dalàna ny toro-hevitra.Mba hanaovana izany, fotsiny hoe ny voalaza nomeraon-telefaonina. Ny tombony amin’ny fomba izany ny toro-hevitra dia mazava: — Pelatanana. Amin’ny fotoana rehetra, na andro na alina, misy andro ny herinandro manam-pahaizana dia vonona ny hamaly ny fanontaniana rehetra. Noho ny toro-hevitra dia tsy mila mitsidika ny biraon’ny orinasa lalàna, mandany fotoana eo am-piandrasana.
Tena matetika, ny olona iray dia mila ny hanosika ny toro-hevitra amin’ny olana ara-pitsarana. Amin’ny toe-javatra toy izany, ny nentim-paharazana ny toro-hevitra dia ny tsy ho vita, satria izany no mitarika fahaverezan ny fotoana.
Online fifampidinihana eo amin’ny telefaonina tsy manana izany drawback, satria izany dia azo tsy amin’ny fotoana rehetra, saingy na aiza na aiza. Tsy ampy ny mahazo ny Aterineto amin’ny fitaovana izay manohana izany endri-javatra.
Avo lenta ny fizaham-pahasalamana
Fepetra takina ny mpahay lalàna dia manome fahafahana azy ireo ny hamaly avy hatrany ny ankamaroan’ny fanontaniana. Amin’ny toe-javatra izay mifandray amin’ny toe-javatra ny avo be pitsiny, ny manam-pahaizana manokana dia mety mila fotoana fanampiny mba familiarize themselves with ny mahay manavaka ny raharaha ary ny manan-danja lahatsoratra ao amin’ny lalàna. Ny tsy fahampian’ny ny fisoratana anarana ao amin’ny tranonkala.Raha noho ny antony maro ny olona tsy te-hampahafantatra ny tenako tena anarany, dia afaka misafidy ny mifandray aminy misy anarana na ny anaram-bositra. Tena anarana sy fanampin’anaran’ny mety ho ilaina ao amin’ny fanomanana ny fanambarana ofisialy, ny filazana sy ny sisa.
Maimaim-poana amin’ny aterineto torohevitra araka ny lalàna amin’ny alalan’ny telefaonina ny namany sary manarona lafiny rehetra ny lalàna. Ankoatra mivantana ny valin’ireo fanontaniana ireo mpisolovava dia manoro hevitra ny marina mazava ho azy fa hetsika ao nomena ny toe-draharaha. Ny manam-pahaizana dia mamaly fanontaniana toy izany faritra ny lalàna toy izany: ny Fianakaviana lalàna. Miresaka momba ny fanontaniana ny famaranana sy ny fanafoanana fanambadiana, ny fisarahana ny fananana, ny fandrafetana ny fanambadiana fifanarahana, ny fitalahoan’ny sy ny sisa. Hetra lalàna.Ny mpahay lalàna dia hamaly izay mety ho fanontaniana mifandray amin’ny hetra, ny fandoavana ny hetra sy ny saram amin’ny hetra soa. Raha ilaina, izy dia hanampy mba hahazoana antontan-taratasy ilaina (ohatra: ny hetra Fanambarana).
Ny asa lalàna
Ny manam-pahaizana manokana dia hamaly izay mety ho fanontaniana mifandray amin’ny fandikana sy ny fampiharana ny fanekem-ny Asa Fehezan-dalàna sy ny hafa ara-pitsipika sy ara-dalàna ny zavatra ataontsika (mpiasa, ny fandroahana, ny fialan-tsasatra, sns.). Heloka bevava sy heloka bevava-fomba fanatanterahana ny lalàna.Iray amin’ireo sarotra indrindra ny faritra ny lalàna, ka ny toro-hevitra mikasika ireny olana ireny no nanatanteraka ny tena za-draharaha ny mpisolovava. Ankoatra ny toro-hevitra, dia hanampy mba hanao fanambarana ny filazana ao amin’ny fanaraha-maso sy ny fitsarana ambony.
Fiantohana sy ny fitaterana ny lalàna. Tato ho ato dia iray amin’ireo tena mitady ho an’ny fakan-kevitra sehatry ny lalàna. Za-draharaha ny mpisolovava no hamaly izay mety ho fanontaniana momba ny fampiasana ny fiara, ny fiantohana sy ny madio ho an’ny fanitsakitsahana ny manan-danja lahatsoratra ao amin’ny lalàna.
Ny fiheverana ny foto-kevitra, ny olana rehetra mifandraika amin’ny fividianana, fivarotana, fifanakalozana, fanomezana ny real estate, ary koa ny olana rehetra mifandraika amin’izany
Manaiky ny fanambarana milaza ny mpanelanelana amin'ny fitsarana. Fitsipika ny manao ny fanambarana ny filazana, ny filaminana sy ny teny fanekena, fanjakana adidy